CIYAARTA QOYSKA: ”Xaaskayga Swedish-ka ah lama hadlin tan iyo Jimcihii” – Davide Ballardini – Gool FM
CIYAARTA QOYSKA: ”Xaaskayga Swedish-ka ah lama hadlin tan iyo Jimcihii” – Davide Ballardini
(Roma) 13 Nof 2017 – Macallinka Genoa ee Davide Ballardini ayaa daboolka ka qaaday inuusan la hadlin xaaskiisa Swedish-ka ah tan iyo markii ay 1-0 uga badiyeen Talyaaniga Jimcihii.
Talyaaniga ayaa caawa looga fadhiyaa inay ka adkaadaan Sweden laba gool oo nadiif ah si ay ugu soo baxaan Kooba Adduunka 2018, balse Ballardini ayaa sheegay in ay xiisadda labada qaran ay xitaa qoysaskii u dhacday.
“Xaaskayga lama hadlin tan iyo Jimcihii. Maalmo ayay igu lahayd, ”waad cabsanaysaa, huh” ayuu ku yiri La Reppublica.
“Swedish-ku waxay ku raaxaysanayaan inay xaaladdan na gaarsiiyaan marxaladdan bilowga ah, maaddaama ay arkayaaan silaceenna, balse waxaan rajaynayaa inay intaa uun ugu ekaato waxa dhan ee ay ku faraxsan yihiin.” ayuu daba dhigay Ballardini oo sheegay inaysan Sweden been been ku garaacin France, Netherlands iyo Italy.